100 Ducada Ducada Ka Dhimashada iyo Burburinta | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda 100 Ducada Ducada ah oo Geerida iyo Burburinta
100 Ducada Ducada ah oo Geerida iyo Burburinta
Cibraaniyada 5: 7:
Isagu maalmihii jidhkiisa ayuu tukanayay oo baryay qaylo iyo ilmo aad u badan oo isaga kaga badbaadiyey dhimashadiisa, oo weliba waxaa laga maqlay inuu ka baqay;
Dhimashada waxaa laga adkaaday dhimashadii, aasitaankiisii, iyo sarakiciddii Ciise Masiix. Ciise wuxuu qaatay furayaashii dhimashada iyo Haadees, Muujintii 1:18. Maanta waxaan soo uruurinay 100 salaadda badbaadinta dhimashada iyo baabi'inta. Kahor intaanan u galin arrintan salaadda badbaadinta, Waxaan jeclaan lahaa inaan helno faham sax ah oo ku saabsan ereyga dhimashada. Marka ujeeddada ama fahamka shay aan la aqoon, xadgudubka iyo khaladaadka ayaa lama huraan ah. Ilaa aad ka fahanto waxa geeridu tahay, weligaa waad u adkaan kartaa sidii rumaystaha. Waxyaabaha soo socdaa waa xaqiiqooyinka Baybalka ku saabsan ee dhimashada:
Waa maxay dhimashadu?
Qeexitaanka guud ee dhimashada waa ficilka dhimashada ama dilka, ama dhamaadka nolosha qofka ama noolaha. Tani waa qeexitaan adduun iyo guud ahaanba la aqbalay. Laakiin bible wuxuu u arkaa dhimashada siyaabo kala duwan. Kitaabka Quduuska ah kama arko dhimashada sida "maxay" halkii ay u aragto geerida "yaa". Geeridu maahan dhacdo oo kaliya, geeridu ma aha dhamaadka nolosha, kuwani waa astaamaha dhimashada, geeridu waa ruux ama nafley. Dhimashadu waa Malag Arch, oo waxaa jira malaa'igo badan oo geerida ka hooseeya malaa'igta geerida. Waa maxay ujeedka malaa'igta geeridu? Ujeeddadu waa in la dilo. Waxaan sidoo kale leenahay malaa'ig kale oo Arch ah oo la yiraahdo Hades ama jahannamo ama qabriga, ujeedka malaa'igtaan ayaa ah in lagu soo ururiyo dadka dhintay meydka ama goobta sugitaanka. Haddaba, sidee baan ku garan karaa tan ?, bal aan aragno waxa uu bible ka inoo sheegayo MUUJINTII 6: 8: 8 Oo bal eeg, waxaan arkay faras cirro leh; oo kii fuushanaana magiciisu wuxuu ahaa Dhimasho, oo waxaa la socday Haadees. Oo waxaa iyaga la siiyey amar ay ku xukumaan dunida waaxdeed oo ay ku dilaan seef, iyo gaajo, iyo dhimasho, iyo dugaagga dhulka.
Kitaabka kor ku xusan, waxaynu ka arkaynaa in dhimashadu ahayd kii fuushan faraska cirro, hades na ay raacday. Weligaa miyaad isweydiisay sababta qof marka uu dhinto, uu u noqdo cirro, taasi waa malaa'igtii dhimashada shaqada. Kitaabka Quduuska ah, malaa'igta dhimashada sidoo kale waxaa loogu yeeraa burburiyaha ama baabi'inaya malaa'igaha, Eeg Baxniintii 12:23, 1 Korintos 10:10, Muujintii 9:11. Malaa'igdani waa malaa'ig dagaal oo Ilaah ah, oo mas'uul ka ah difaacidda dadka Ilaah iyadoo nafta laga qaadayo ama ciqaabaya dadka Ilaah iyadoo la baabi'inayo markay baadiyoobaan. Laakiin maxaa keenay macluumaadkan oo dhan ?, Markuu Ibliisku samada ka soo dhacay, saddex meelood oo meel malaa'igaha ayaa la dhacay isaga, iyaga dhexdooda waxaa ku jiray Malaa'igtii geerida, iyo Haadees (Jahannamo ama qabri), malaa'igtaan oo adeegsanaya awoodda sheydaanka ayaa xukumay adduunka laga bilaabo wakhtiga muuse ​​ilaa wakhtiga Ciise Masiix. (Rooma 5: 12-14). Addoon kasta oo Ilaah oo dhintay bilowgii wakhtiga ilaa waqtiga Masiixa, midkoodna jannada ma kori karo, malaa'igta dhimashada iyo haad awgii. Ruuxyadan ayaa maxaabiis ahaan u haystay ilaa Masiixu yimid.
Markii Ciise dhintay, wuu u tegey jahannamada oo adkaysay dhimashadii iyo cadaabta, (Cibraaniyada 2:14), ayaga ka qaaday furayaashii (Xukunka) dhimashadii iyo cadaabkaba, oo waxay sii deysay dhamaan maxaabiistii ay ku xirnaayeen, taasina waa sababta ku jirta Matayos 27:52 inaad ku arkeyso in Quduusiintii hore oo dhan ay lahaan jireen dhintay, ka soo sara kacay qabrigii (Haadees) oo jannada kor ugu aaday Masiix. Haddana taasi ma aha, maalinta u dambaysa, malaa'igta dhimashada iyo harooyinka ayaa sheydaanka ku dhex gali doona harada dabka oo ah dhimashada labaad. Maxaa yeelay, iyagu waxay ku caasiyoobeen Ibliis, oo iyaga waxaa lagu dhex tuuri doonaa baddii dabka, oo mar dambena ma jiri doonaan.
Mu'miniin ahaan, kama baqeyno dhimashada, furayaasha iyo awooda dhimasha kuma sii jiraan gacanta Ibliiska, laakiin waxay ku jiraan gacanta Ciise. Ninna kuma dili karo waqtigaaga ka hor, waa inaad iska caabbisaa shaydaanka markuu fikirka dhimashada lama-filaanka ah keeno qalbigaaga. Masiixiyiin badan ayaa dhicis ku dhinta maxaa yeelay waxay jaahil ka yihiin runtaan. Sabuurrada 91: 16, Ilaah wuxuu yiri "waqti dheer waan ku qancin doonaa" ilmo Ilaah ahaan waxaad xaq u leedahay inaad cimri dheer gasho, sidoo kale kuwa aad jeceshahay sidoo kale. Ka qayb qaado ducadan samatabbixinta ah oo ka dhan ah dhimashada iyo halaagga adoo fahamsan maanta, adoo og inaad tahay qof aan la dili karin, oo keliya Ilaah ayaa furaha noloshaada leh oo wuxuu yidhi way sii dheeraaneysaa. Sidaa darteed markaad adigu ereyadiisa ku adkeyneyso tukashadaan maanta, waxaan ku arkaa adigoo ku hoos socda ilaalinta ilaahnimada ee magaca Ciise.
1. Waan baabi'inayaa awood kastoo shaydaan oo iga wakiil ah allabari kasta oo shar ah, magaca Ciise.
2. Waan baabi'iyaa meel allabari oo shar ah oo kusaabsan noloshayda magaca Ciise
3. Dabaysha Ruuxa Quduuska ah, waxaan nolosha kula hadlayaa jidhkayga dhinta, magaca Ciise.
4. Waxaan u isticmaalaa dhiiga ciise inuu badalo taariikh kasta oo liidata oo ku saabsan nolosheyda, magaca ciise.
5. Waxaan diidayaa inaan aqbalo badalka shaydaan ee aayahayga, magaca Ciise.
6. Waxaan diidayaa in cadowga waxyaalaha wanaagsani ku jiido, magaca Ciise.
7. Naxashka kasta oo noloshayda ku jira ha u oggolaado dabka Ilaah oo ha lagu dubay hadda, magaca Ciise.
8. Awood kasta oo curyaamiin ah oo curyaamiyey mustaqbalkayga, hoos u dhaca oo dhinta, magaca Ciise.
9. Xaddid kasta oo shar ah oo laga dhaxlo meel kastoo noloshayda ka mid ah, ka bax hadda, magaca weyn ee Ciise.
10. Naqshadeeye kasta oo dhuxul dhagax ah, waxaan idinku amrayaa inaad ku dhacdo oo ku dhinto magaca Rabbigeenna Ciise Masiix.
11. Daruur kasta oo geeri aan dhimanin, imminka ku jirta, magaca Ciise.
12. Waan diidanahay in laygu beddelo qof dhintay, oo lagu bixiyo magaca Ciise.
13. Nin walboo shar leh oo geerida ku dhinta ha la ii dilo magaca Ciise.
14. Wadahadal shaydaan oo Shaydaanka ah oo quseeya nolosheyda, ha lagu baabiiyo magaca Ciise.
15. Go'aan kasta oo iga soo gaadha noloshayda jinni oo sixir ah, waa in lagu baabi'iyaa, magaca Ciise.
16. Waan diidanahay guulaha la afgaran waayey ee noloshayda oo dhan, magaca Ciise.
17. Dhammaan kuwa noloshayda ku dhex nool ha u burburo magaca Ciise.
18. Fikir kasta oo dhimasho iyo riyooyinkasta ha laygu dilo, ha dul saarnaato magaca cadaawayaashayda magaca Ciise.
19. Jeermis kasta oo jirkayga ku jira ha dhinto, magaca Ciise.
20. Waran kasta ha u dhinto magaca Ciise.
21. Cudurro qarsoon, ayaa jidhkayga iga dhex baxay, magaca Ciise.
22. Waxaan ku amrayaa dhibkasta oo jirkayga ka mid ah inay ku qalalaan, magaca Ciise.
23. Wax kasta oo meyd ah oo ku jira jidhkayga, ku hel nolosha, magaca Ciise.
24. Dhiiggayga ha lagu shubo dhiigga Ciise.
25. Waxaan ku amrayaa cilad kastoo gudaha ah ee ku jirta jidhkayga, inay amar ku hesho, magaca Ciise.
26. Waxaan ku amrayaa itaaldarad kasta, inay la soo baxdo xididdadaada oo dhan, magaca Ciise.
27. Waxaan ku kala firdhiyey iskaashi kasta oo miyir leh iyo miyir-qabasho xaga cudurada ah, magaca Ciise.
28. Dabayl cirwareen ah oo Rabbi ha ku tuuro dabayl kasta oo caafimaad qabta, magaca Ciise.
29. Jirkayga waan ka sii daayaa habaarka kasta oo naafa ah, magaca Ciise.
30. Dhiigga Ciise ha ku daadsado dhiig kasta oo dhiigayga ah, magaca Ciise.
31. Waxaan soo ceshadaa xubin kasta oo jidhkayga ka mid ah oo ku haysata saaxiriinno iyo saaxiriin meel allabari xun oo ku yaal magaca Ciise.
32. Sayidow i caawi, inaan garto codkaaga noloshayda magaca Ciise
33. Sayidow, meeshaan indha la ', arag magaca Ciise
34. Waxaan amrayaa cabsida aan ka qabo inay hadda iga daadato magaca Ciise.
35. Anigoo ku tuuraya culays kasta oo walaac ah, magaca Ciise.
36. Waan diidanahay inlagula xiriiro asxaab xunxun, magaca Ciise.
37. Waxaan tuurayaa dariiq kasta oo ku qariya horumarkayga, magaca Ciise.
38. Noloshayda ruuxiga ah ha u dirto cabsi xerada cadowga, magaca Ciise.
39. Sayidow, iga badbaadi ereyada xunxun iyo hadalada xun ee magaca Ciise
40. Sayidow, cadaawayaashayada noloshayda hortayda lagu aaso magaca Ciise.
41. Waxaan xidhaa duur kasta iyo ruux lamadegaan ah oo kashaqeynaya nolosheyda oo dhan, magaca Ciise.
42. Sayidow, calaamooyin iyo yaabab igu dhex garsoo magaca Ciise
43. Sayidow, magac Ciise igu yeel dhacdo yaab leh
44. Rabshadaha qalqal galiya cadowga ha ku kicinayo xero cadaawayaashayda, magaca Ciise.
45. Naar jannada ha ku tuuro noloshayda baryootanka, magaca Ciise.
46. ​​Haddaba ku subkidda rabbaaniga ah ee cibaadooyinka xagga ruuxa ah ha iigu soo dego magaca Ciise.
47. Meesha allabariga meeshayda salaadda ha hesho maanta, magaca Ciise.
48. Sayidow, ii yeel ciise ciise magaca Ciise
49. Eebow iga cafi dembigayga xadgudubka ah magaca Ciise
50. Sayidow ciise ciise ilaah ha ii dhigo magaca Ciise.
51. Sayidow Ciise, dib u noolee oo daahi meesha allabariga salaaddayda.
52. Xisaabtanka cadowgu ha ku qaado noloshayda dabeed, magaca Ciise.
53. ammaanta cadowga noloshayda ha ku ceeboobo magaca Ciise.
54. Cidna uma isticmaali doono noloshayda kobcin, magaca Ciise.
55. Waan baabi'inayaa ciidan kasta oo shar leh oo abaabulaya noloshayda, magaca Ciise.
56. iskutallaabta Masiixu ha yimaado aniga iyo cadaawayaasha, magaca Ciise.
57. Waxaan xidhayaa albaab walba oo Shaydaan iiga furan ama aniga iyo awowayaashayda oo ku leh dhiigga Ciise.
58. Waan jabiyey oo naftayda ka fogeeyay dhibaatooyinka ku dhaca uurka oo dhan, magaca Ciise.
59. Waan ka go'ay oo waxaan ka baxay heshiis kasta oo xun oo xagga diinta ah, oo ku imanaya magaca Ciise.
60. Waan ka go'ay oo waan iska fogeeyey addoonsiga cudur kasta oo jidhka ah, magaca Ciise.
61. Waan jebiyaa oo waan iska fogeeya habaar kasta, oo sixir, sixir iyo xarago leh ayaa la saaray safka qoyskayga.
62. Waan ka go'ay waana iga fogeeyey ruux kastoo shar leh iyo cibaadada shaydaanka, magaca Ciise.
63. Xoog kasta oo ku xeel dheer meelkastoo noloshayda ah ha ku xidho silsilado dab kulul, magaca Ciise.
64. Awoodda ka hortagaysa noloshayda abuurida Eebbe doonayo inuu ku koro, tagto, magaca Ciise.
65. Waan diiday in aan goosto wax xun goosashada, oo lagu bixiyo magaca Ciise.
66. Dhammaan Wolves ka shaqeysa nolosheyda, waa in la xidhaa oo la qaataa dabka onkodka Eebbe, magaca Ciise.
67. Wax alla wixii iga hor joogsada wanaaggayga, ku bixi magaca Ciise.
68. Wanaaggaygii aasay, u soo bax magaca Ciise.
69. Ruuxa Quduuska ah, nafsaddaada ii muuji, magaca Ciise.
70. Ruuxa Quduuska ah, noloshayda dul mari magaca Ciise.
71. Sayidow, ammaantaadu ha ku muuqato noloshayda magaca Ciise
72. Sayidow, dabkaagu ha u shiday jidhkayga mid aad u kulul oo jinni kasta oo shar leh ku jiro magaca Ciise
73. Sayidow, cudurkaaga daadi oo ha ka welwelin magaca Ciise
74. Waxyaabaha hadhay ee sharku waa in lagu shubaa dabka Ilaah, magaca Ciise.
75. Ruuxa Quduuska ah, igu dhiirrigeli inaan ku tukado inaan xiro dareenka Ilaah, magaca Ciise.
76. Ruuxa Quduuska ah, ii awoodey in aan ku tukado salaadda qaddar-beddelasho, magaca Ciise.
77. Sunta, ka bax noloshayda hadda, magaca Ciise.
78. Waxaan burburiyaa dhamaan ilaha awoodaha, magaca Ciise.
79. Waan burburiyey, waanan baabi'inayaa shuqulladii qarsoonaa ee cadowga, iyadoo lagu bixiyay magaca Ciise.
80. Wax kasta oo noloshayda ah oo xoog leh ku dumiya, oo ah magaca Ciise.
81. Waxaan xidhayaa oo iska tuuraa ruux kastoo fuliya habaar xun oo noloshayda dhexdeeda magaca Ciise
82. Waxaan ka soo horjeedaa magac kasta oo xun oo aniga igu saabsan, magaca Ciise.
83. Waan afgembiyaa oo naftayda ka siiyaa xukunka iyo xakamaynta xun, magaca Ciise.
84. Waxaan la baxay awooda oo ah shay kasta oo jinni iga gees ah, magaca Ciise.
85. Dhammaan hadiyadaha jinniga, hawlkarnimadayda ugusoo bixi noloshayda, magaca Ciise.
86. Magacyo xunxun, wax qabadkayga noloshaada ku mari magaca Ciise.
87. Waxaan joojiyaa kiraysiga xumaanta qayb kastoo noloshayda ah, magaca Ciise.
88. Waan diiday in aan ka qaato agab qaldan bangiga nolosha, magaca Ciise.
89. Waan diidanahay inaan raaco dariiqa qaldan, magaca Ciise.
90. Waan diiday in dhulbahante cadowga, magaca Ciise.
91. Sayidow, buurahayga u beddel calaamadaha magaca Ciise
92. Waan diidanahay in laygu burburiyo buuraha shaydaanka, magaca Ciise.
93. Waxaan helayaa subkid si aan u ceebeeyo fallaarta shaydaanka, magaca Ciise.
94. Waxaan ka jaray sahay kasta oo cunto ah oo ku saabsan dhibaatooyinkayga, magaca Ciise.
95. onkodka Rabbiga ha ka tirtiro meel allabari xun oo iga gees ah oo lagu dhisay oo lagu sameeyo magaca Ciise.
96. Sayidow, iga badbaadi magaca dhimashada iyo baabi'inta magaca Ciise
97. Waxaan canaantaa xoog kasta oo ruuxa dharaggu ila gees ah oo lagu baabiinayo magaca Ciise.
98. Naftayda ayaan ku daboolaa dhiigga Ciise.
99. Cadowgay kasta oo aan la magacaabin noloshiisa ka dib ha ku xardho Ruuxa Quduuska ah, magaca Ciise.
100. Waxaan u isticmaalaa xabbadda Sayid si aan u jebiyo khafiif kasta oo naftayda saaran oo lagu helo magaca Ciise.
Aabe waan kuugu mahadcelinayaa sidaad ugu jawaabtay ducadaydii ku jirtay magaca Ciise.
article Previous30 Qodobbada Salaadda ee Ilaalinta iyo Samatabbixinta Carruurteenna
Next article100 Dhibcood Oo Loogu Tukado Guusha Ka Dhanka Cadowga
Happiness Agoosto 6, 2021 X XXX: 5 am
Dah wanavyotranslate kwenda kiswahil wanakosea xaqiiqdii
30 Salaadiin Dhalasho Awood leh Mahadnaq
100 Dhibcood oo Salaadda looga hor tago Maamulayaasha iyo Awoodaha